Himalaya Dainik » महिला-पुरूषको यौ’न जीवन ‘ध्वस्त’ बनाउने ६ कारण !
महिला-पुरूषको यौ’न जीवन ‘ध्वस्त’ बनाउने ६ कारण !
यौ’नको दाम्पत्य जीवन सफल बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । यौ’नले शा’रीरिक स’न्तुष्टि दिन्छ, मा’नसिक त’नाव कम गर्छ, साथसाथै दम्पतीबीचको सम्बन्धलाई सुमुधुर बनाउदै प्रगाढ बनाउँछ ।
यौ’न जीवनमा ध्व’स्त बनाउने तत्व
सफल यौ’न जीवनको लागि यौ’नाङ्गहरुमा पनि राम्ररी र’क्तसंचार हुनुपर्छ । तर, उच्च रक्त’चापको कारण र’क्तप्रवाहमा अवरोध पैदा हुन्छ । परिणम, यौ’न इच्छा घट्दै जान्छ र याै’न जीवन क’मजोर हुन्छ ।
बिहानदेखि बेलुकीसम्मको भागदौड, आर्थिक सम’स्या, असमयमा खानपानको असर त’नावको रुपमा देखापर्छ । स्वास्थ्यका साथसाथै यसले हाम्रो यौ’नक्रियामा पनि प्रभाव पार्छ ।
नियमित म’दिरापान गर्दा यौ’नरुची घ’ट्छ । त्यतीमात्र होइन, यसले तपाईको शयनकक्षामा पनि त’नाव निम्त्याउँछ । पत्नीको भावनाको कदर हुँदैन । त्यसैले म’दिरापान गर्न छाडौ ।
डि’प्रेसनले यौ’न जीवनमा नराम्ररी प्रभाव पार्छ । एक त डिप्रे’सनको कारण तपाईमा यौ’न सम्प’र्कमा मन जादैन , अर्कोचाहि डिप्रे’सनको औ’षधीले यौ’नरुची घटाउदै लैजान्छ ।
ग’र्भनिरोध औष’धिले महिलाको टेस्टोस्टेरन लेभल कम गर्छ । जसले महिलालाई यौ’न इच्छा हुँदैन । यो औ’षधी एस्ट्रोजनले बनेको हुन्छ, जसलाई लामो समयसम्म सेवन गर्दा यौ’न जीवन खलबलिन्छ ।
जुन व्यक्तिको तौल बढी हुन्छ, उसको फ्याट सेल एस्ट्रोजेन उत्पादन गर्छ । यसले उनको यौ’न-रुचीमा कमी ल्याउँछ । नियमति व्यायम गर्नेको यौ’नक्रि’या राम्रो हुन्छ, सक्रिय हुन्छ । त्यसैले मोटोपन घटाउनुपर्छ ।
यो पनि- कम यौ’नस’म्वन्ध राख्ने महिलाको म’हिनावारी चाँडै सुक्छ ?
महिलाहरु जो यौ’न क्रि’याकलापमा कम सक्रिय हुन्छन्। उनीहरुको महि’नावारी छिट्टै सु’क्छ भन्ने कुरा हालै गरिएको एउटा सर्वेक्षणबाट पत्ता लागेको छ । खास गरेर ३५ वर्षभन्दा माथिका महिलाहरू याै’न का’र्यमा कम सरिक हुदाँ यस्तो सम’स्या हुने बताएको छ ।
यौ’न स’म्पर्क राख्नाले क्यालोरी बर्न हुन्छ, मु’टु स्वास्थ हुन्छ, छाला राम्रो हुन्छ भने नियमित यौ’न सम्प’र्कमा नरहनाले यसमा विभिन्न सम’स्याहरु सिर्जना हुने अध्ययनले देखाएको हो।
जुन महिलालाई यौ’न क्रि’याकलापमा धेरै रुचि हुन्छ वा उनीहरु यस काममा धेरै सक्रिय रहन्छन्। उनीहरुको महि’नावारी लामो समयसम्म सुक्दैन भन्ने कुरा एउटा अध्ययनले पत्ता लगाएको छ। जुन महिलाले हप्तामा एक पटक यौ’न स’म्पर्क राख्छिन् । त्यस्ता महिलाहरुको महि’नावारी सुक्ने सम्भावना महिनामा एकपटक मात्र यौ’न स’म्पर्क राख्ने महिलाहरुको तुलनामा २८ प्रतिशत कम हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
जब ढल्किदो उमेरसँगै महिलाहरुले यौ’न सम्प’र्क राख्दैनन्। उनीहरुको शरीरले अ’ण्डा उत्पादन बन्द गर्ने संकेत दिनथाल्छ । जसका कारण म’हिनावारी सु’क्न थाल्छ । वास्तवमा जब शरीरले प्र’जनन प्रक्रियाका लागि अ’ण्डाको आवश्यकता छैन भन्ने संकेत दिन थाल्छ। जसका कारण अ’ण्डा बन्न बन्द हुन्छ र महि’नावारी सु’क्छ भन्ने कुरा सर्वेक्षणबाट प्रमाणित भएको हो।
जब महिलाहरुको शरीर भित्र अ’ण्डा बन्छ । अ’ण्डा बन्ने क्रममा उनीहरुको रो’ग प्रतिरोधक क्ष’मता कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा तीन हजार महिलामा गरिएको उक्त अध्ययनले पत्ता लगाएको छ ।
यदि तपाईं म’हिनावारी छिट्टै नसु’कोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आफ्नो यौ’न क्रि’याकलापमा सक्रिय रहनु आवश्यक छ । सकेसम्म यस गतिविधिमा धेरै सक्रिय रहने कोसिस गर्नुपर्छ । यसो गर्नाले तपाईंको महि’नावारी छिट्टै सुक्दैन । साथै, यसले तपाईंलाई स्वास्थ पनि बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैले तपाईं फिट र स्वस्थ रहनुका लागि आफ्नो यौ’न जीवनलाई स’क्रिय बनाउनु अति नै आवश्यक रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
पाकिस्तानमा १ सय बढी मानिस सवार विमान दुर्घटना (भिडियोसहित)
डिस्चार्ज भए कोरोनाले आमा गुमाएका १६ दिने शिशु !